ဤသီးခြားတည်ရှိမှုဆိုင်ရာကြေညာချက်ကို ၂၀၁၂/၂၀၁၁ နေ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနေ့စွဲနှင့်ဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာ၏တရားဝင်နေထိုင်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုကြေငြာချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မှသင်ရရှိသောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည် https://comme-un-pro.fr။ ဤဖော်ပြချက်ကိုသင်သေချာဖတ်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုပြင်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးသန့်တည်ရှိမှုဥပဒေ၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာသည် ဆိုလိုသည်မှာအခြားအရာများအနက် -
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့မည်ပုံလုပ်ဆောင်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည်။ ငါတို့သည်ဤ privacy ကိုကြေညာချက်အားဖွငျ့ဤအမှုကို;
သင်၏ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစီမံရန်သင်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသဘောတူညီချက်ကို ဦး စွာတောင်းခံသည်။
၁။ ရည်ရွယ်ချက်၊ အချက်အလက်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားသည့်ကာလ
၁.၁ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်စာရင်းအင်းများကို စုစည်း၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်များကိုပရိုဆက်ဆာနှင့်အခြားတတိယပါတီများနှင့်သာမျှဝေသည်။ ၎င်းသည်အောက်ပါအပိုင်း (များ) နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
3 ။ ကွတ်ကီး
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ cookies တွေကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖတ်ရှုပါ ကွတ်ကီးမူဝါဒက.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမည်မျှမကြာခဏနှင့်မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်ကိုသိရန်အမည်ဝှက်စာရင်းဇယားများကိုခြေရာခံသည်။ IP လိပ်စာအပြည့်အစုံပါ ၀ င်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ဆို့ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိုအလေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ရန်သင့်လျော်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ ဤအချက်ကလိုအပ်သောလူများသာသင်၏ဒေတာကိုရယူနိုင်ခွင့်၊ ဒေတာကိုရယူသုံးစွဲခြင်းကိုကာကွယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးအစီအမံများကိုပုံမှန်ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်သေချာစေသည်။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုဖော်ပြချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိလင့်များဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဤတတိယပုဂ္ဂိုလ်များကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစိတ်ချရသော (သို့) လုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြင့်ကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မအာမခံနိုင်ပါ။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုအသုံးမပြုမီသင်ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုဖော်ပြချက်အားပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါဟာသင်မှန်မှန်မဆိုဖြစ်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများကိုသတိထားဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ဒီ privacy ကိုကြေညာချက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြောင်းအကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှသင့်အားအကြောင်းကြားပေးပါမည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင့်တွင်အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည် -
လက်လှမ်းမီမှုအခွင့်အရေး - သင်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ပြင်ဆင်ခွင့် - သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးဖြည့်စွက်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ ဖျက်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင်၏အချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းခြင်း - သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်အားလုံးကို Controller မှတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပြီး၎င်းကိုအပြည့်အဝလွှဲပြောင်းရန်အခြားထိန်းချုပ်သူသို့သင်၌အခွင့်အရေးရှိသည်။
ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့် - သင်၏ဒေတာများပြုပြင်ခြင်းကိုသင်ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤကုသမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါလိမ့်မည်။
သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်မှားယွင်းသောသူ၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဖျက်ပစ်ခြင်းမပြုကြောင်းသေချာစေပါ။
သငျသညျငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ (အကြောင်းတိုင်ကြားစာ) ကိုင်တွယ်နေသောလမ်းကိုဝစွာစားကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခွင့်အာဏာနဲ့တိုင်ကြားချက်အိပ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအရာရှိအားအီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမှအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ သင်ဤ privacy ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများရှိသည်သို့မဟုတ်ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအရာရှိအဘို့အလိုလျှင်, သင်သို့မဟုတ် tranquillus.france@comme-un-pro.fr ကနေတဆင့်, Tranquillus ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
E-mail ကို : tranquillus.france@comm-un-pro.fr